Manchester United Oo Dooneysa Inay Lasoo Saxiixato Daafac Midig Oo Cusub
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester United oo dooneysa inay lasoo saxiixato daafac midig oo cusub
November 28, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso inay daafac midig cusub keento kooxda sannadka 2021 si ay tartan ugu hesho Aaron Wan-Bissaka .
23 jirkaan ayaa qaab ciyaareed daafac ah ku soo bandhigay Red Devils tan iyo markii uu ka yimid Crystal Palace sanadkii 2019 laakiin wuxuu ku dhibtooday inuu gacan ka geysto dhanka weerarka.
Sida laga soo xigtay ESPN , kooxda 20-ka jeer heysata horyaalnimada Ingiriiska ayaa aaminsan in Wan-Bissaka uu imaan karo kooxda Old midkood Janaayo ama xagaaga dambe.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in United ay ku rajo weyn tahay in ciyaaryahan cusub uu ‘dardar galiyo horumarka’ ciyaartii hore ee xulka England ee da’doodu ka hooseyso 21 jirada.
Wan-Bissaka ayaa 58 kulan u saftay Red Devils tan iyo markii uu yimid laakiin kaliya wuxuu ku soo kordhiyay hal gool iyo afar caawin, halka uu kaliya afar caawin sameeyay 46 kulan oo uu u ciyaaray Palace.
Diogo Dalot ayaa haatan amaah kula jooga AC Milan, laakiin United ayaa la sheegay inaysan xiiseyneynin inay iska iibiso daafaca midig madaama ay kalsooni ku qabaan inuu horumarin doono ciyaaryahan kooxda koowaad ah sanadaha soo socda.